Dagaallo Ciidamada Wayaanaha lagu naafeeyey
Lacago deeq ah oo isugu jira Shillin Somali iyo Doollar ayaa maanta la soo gaarsiiyay Golaha Samafalka iyo Horumarinta Soomaaliyeed, waxaana lacagtan ku kala deeqay dad soomaaliyeed oo ku kala nool dalka gudahiisa iyo dibaddiisa, waxayna kala yihiin sida soo socoto:-
ð Dugsiga Hoose, Dhexe iyo Sare ee Salmaan Al-faarisi ee Magaalada Muqdisho ayaa wuxuu soo gaarsiiyey Golaha Samafalka iyo Horumarinta Soomaaliyeed deeq lacag ah oo gaaraysa $601. (lix boqol iyo kow dollar).
ð Ganacsatada Degmada Baraawe iyaguna waxay soo gaarsiiyeen Golaha Samafalka iyo Horumarinta Soomaaliyeed deeq lacag ah oo gaaraysa $600,( lix boqol Dollar).
ð Dugsiga Hoose, Dhexe iyo sare ee New Afrika isaguna wuxuu ku deeqay lacag dhan 2,500,000 ( laba Milyan iyo Shan boqol kun ).
ð Sidoo kale 13/12/2006 Jaaliyad soomaaliyeed oo ku dhaqan Dalka Shiinaha, ayaa Waxay soo gaarsiiysay Golaha Samafalka Iyo Horumarinta Soomaaliyeed Deeq lacag ah oo gaareysa 7150 $ (Todoba kun Boqol iyo Konton Dollar),
Golaha Samafalka iyo Horumarinta Soomaailyeed wuxuu mahad ballaran u celinayaa Walaalaha ku deeqay lacagtan, wuxuuna ALLE uga baryayaa inuu ka ajar siiyo deeqdaas wax ku oolka ah oo ay u fidiyeen walaalahooda ku dhibaatoobay Daadadka iyo Fatahaadaha.
Goluhu wuxuu ummadda Soomaaliyeed ugu baaqayaa inay sii laba laabaan kaalmo ururinta inta xaaladdu taagan tahay, intii horey wax ka geysatayna waxaan leennahay kheyr Alle ha idinka siiyo.
La soo xiriir: Tel: 854155, 235646, 930773: Mobile: 577471 ,506308 , 987371
Kuna soo hagaaji wixii tabarrucaad ah
Global Money Transfer :
Guddoomiyaha Golaha Samofalka & Horumarinta Soomaaliyeed
Sheekh Axmed Maxamed Suleymaan